Chii chingaitwe muvhiki rekupedzisira pamusika wemusika? | Ehupfumi Zvemari
Uine mazuva mashoma kwazvo kusvikira rimwe gore rekutengesa rapera, pane mashoma mashoma marongero aunogona kutarisana nawo ekupedzisa gore riine hunyanzvi maererano nemhedzisiro. Kunyangwe zvakadaro, iwe une hunyengeri hunyengeri kutarisana negore uine tarisiro yakakura. Mushure megore ra2018 ichaenda pamwe nekuderera kweiyo inosarudzika index yeSpanish equities chimwe chinhu chinopfuura 10%. Kwangosara mazuva mashoma kuti iwe ugone kugadzirisa zvawakakanganisa kusvika ikozvino. Kunyangwe pasina mubvunzo pasina zvishamiso mhedzisiro sezvaunogona kunzwisisa.
Kubva pamaonero emari, chiyero chekutanga chaunogona kutora kubva ikozvino kuendesa imwe yako kurasikirwa nezvinzvimbo. Nechikonzero chiri nyore kwazvo kuti unzwisise uye icho chinogara muchokwadi chekuti aya anorasikirwa mafambiro mumusika wemasheya anogona kuverengerwa mune yako inotevera mari chirevo. Sei? Zvakanaka, nechimwe chinhu chakareruka sekuchibvisa kubva purofiti inogadzirwa muzvinhu zvako wega kana zvemhuri. Nenzira iyi, haufanire kubhadhara mari yakawanda seyakamboita maekisesaizi kana kunyangwe mune zvakanakisa mamiriro ekudzoka anozove nerupo. Chero zvazvingaitika, misiyano yakanyanyisa.
Chero zvazvingaitika, zano rinonyanya kushanda rine marongero aunogona kushandisa izvozvi kuitira kuti kuchengetedza kwacho kubatsire nenzira yakanaka. Ehezve, dzimwe nzira dzauchazove nadzo havangavi vazhinji kwazvo sezvaunga fungidzira, asi zvirinani ivo vachakubatsira iwe kupedzisa gore nerutsoka rwerudyi. Izvo hazvisi zvishoma sezvo musika wekuyera wakasimudzira mune ino yakaoma musika wekutengesa. Iwe unoda here kuziva mamwe mazano ekugutsa ichi chinodiwa? Zvakanaka, teerera zvishoma nekuti zvinogona kukubatsira kunatsiridza yako account yekuchengetedza account.
1 Svondo rapfuura: enda kuma values ​​mune trend
2 Kukunda kuramba
3 Sarudza matura anonyanya kudzivirira
4 Kutengesa mashandiro
5 Dzimwe nzira dzekudyara
6 Enda kunzvimbo dzenyika dzese
Svondo rapfuura: enda kuma values ​​mune trend
Yekutanga nzira dzekudyara dzinouya kubva pane zano rakareruka sekumisikidza mashandiro muzvivigiro zviri mune yakajeka kumusoro kodhi, pasina zvinopesana zviratidzo. Uye kana zvichibvira izvo zvakare iva nesimba tsime, zvirinani pane zvako zvaunofarira. Iwe unenge uine chimwe chivakwa kuitira kuti muvhiki rino rapfuura maitiro asadzokere shure, chimwe chinhu chinoratidzika kunge chisingaite. Unogona kuwana zvinonakidza zvemari zvinowanikwa uye chakanakisa chinhu ndechekuti kuvhiya uku kuchaitwa munguva pfupi kwazvo iyo ichabatsira nzvimbo dzako mukudyara kwenguva pfupi kwauri kutarisana nako panguva ino.
Chimwe chezviitiko zvakanakisa zvaunogona kuenda panguva ino yakakosha yegore kuri kuona iwo maricho akatambura kushorwa kwavakave nako kusvika zvino. Chichava chiratidzo chine simba pane iyo kuenderera kwekumuka mumisika yemari. Asi kwete chete mune ipfupi mazwi, asiwo nepakati nepakati, paunogona kuwedzera mazwi ekugara kwemamwe mavhiki kana kunyange mwedzi. Hazvishamisi kuti iyi ndiyo imwe yemaitiro ekudyara ayo asingambokundikana sezvo iine kuvimbika kukuru kubva kune ese maonero maonero aunofunga kubva zvino zvichienda mberi.
Sarudza matura anonyanya kudzivirira
Zano rakawanda rekuchengetedza nderekutenga migove mune mamwe emakambani akanyorwa. Pamwe kufarira kwaunowana kubva mukuvhiya uku hakuna kunyanyisa, asi zvirinani hauzorase zvinoyemurika zviyero kana kuti izvo zvinokukanganisa iwe pachiyero cheakaundi account yako. Kunyangwe chinhu chakanyanya kurairwa ndechekuti iwo masheya ari munzvimbo dziri nani kuita rwendo rwekumusoro mumazuva mashoma aya anosara kusvika kupera kwegore rino razvino. Kune rimwe divi, kumwe kwekuchengetedzeka kune mugove wakakura kwazvo, pakati pe5% ne7% maererano nemakambani emagetsi.
Kana vari vatengesi vane hukasha mumisika yemari, pane zano rinogona kuvanakidza. Kunyangwe pamutengo wekutora dzimwe njodzi mune dzimwe sarudzo dzataurwa pamusoro. Izvo zvinoenderana nekuita kuti kuchengetedza kubatsire nenzira inokurumidza uye iyo inogadziriswa kuburikidza nekuita kwema intraday, kana sekuzivikanwa kwavanoitwa mune imwechete yekutengesa chikamu. Nekudaro, kutora iyi modhi yekudyara hakuzove nesarudzo kunze kwekutsvaga uye kuona akanyanya kusimba masheya. Ndokureva, kuti vanopa musiyano wakakura pakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi. Kuti utore mukana weakasiyana aya akakosha, kunyangwe izvi zvichave zvakafanira kupa kumwe kudzidza muchimiro cherudzi urwu rwekuita kwakakosha.
Ehezve, zano rinoshanda kwazvo revhiki rino rekupedzisira regore rino ratiri kusiya ndere kusarudza mimwe misika. Ine mukana wekuti iwe unogona kuwana zvinonakidza zvakawanda kupfuura pakutanga. Kunyanya kana ivo vari pasi pe zvakajeka bullish muitiro sezvo nzira yayo yekumusoro iri kumusoro zvakanyanya. Mumwe weiyi mienzaniso unogadzirwa nemisika yesimbi yakakosha, iyo pakupera kwegore iri kuratidza kuonga kuri kukura mumitengo yavo. Iyo inogona kupedzisira yave nguva yekudyara mune izvi zvemari zvinhu uye kunyanya mugoridhe. Kunyangwe ichafanirwa kunge iri kunze kwemusika wemusika sezvo iwo asina kunyorwa pane echinyakare indices.
Enda kunzvimbo dzenyika dzese
Iwe haufanire kungogumira iwe kumisika yepamba uye inogona kunge iri nguva yekubva kumiganhu yedu uende ku misika yekutengesa yakawanda kwazvo munyika. Hazvishamise kuti misiyano inogona kuve yakakosha, nekupararira pamusoro pe20% kana kunyangwe mune zvimwe zviitiko chaizvo. Iwe uchafanirwa kunyatsoteerera kune shanduko yemakuru epasi rose maindekisi ekuvandudza mashandiro nekukurumidza uye kusati kwapera kwegore rino rakaomarara. Beyond kumwe kwekufunga kwehunyanzvi uko kwakanyanya kuitirwa kwepakati nepakati refu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chii chingaitwe muvhiki rekupedzisira pamusika wemusika?